मुंडा टाउको र दाह्री हेर्नुहोस् स्टाइलिश पुरुषहरू
कपाल टाउको र दाह्री, राम्रो वा नराम्रो विचार?
के स्मिथ (बीचमा) 'सुसाइड स्क्वाड' मा कपाल काटिएको टाउको र दाह्री खेल्नेछ
कसले भने कि दाह्री खौरिएको मान्छे दाह्रीमा राम्रो देखिंदैन? यस नोटमा हामी वर्णन गर्दछौं किन तपाईं एक समयमा कपाल काट्नु हुँदैन (पन इरादा गरिएको) को समयमा तपाईको अनुहारको कपाल बढ्न दिनुहोस् यदि तपाईको कपाल काटिएको छ भने पनि.
यो सत्य हो कि माथिल्लो भाग र टाउकोको तल्लो भागको बिचमा कडा भिन्नता सिर्जना गरिन्छ, तर त्यो जहाँ यसको मुख्य सद्गुण छ। दाह्री टाउको र दाह्री लगाउनुहोस् छविमा निश्चित साहस ल्याउँछ यदि तपाईं कडा मान्छे को रूप प्राप्त गर्न खोजीरहनुभएको छ भने, यो नब्सको साथ तपाईंसँग आउँनेछ, विल स्मिथको पछिल्लो फिल्म 'सुसाइड स्क्वाड' मा, जसमा उसले खतरनाक भाडामा खेल्छ।
तर पूरै दाह्रीको साथ कपाल काटिएको टाउकोको साथ सधैं कठोरता हुँदैन, तर हामी पूर्ण विपरित धारणा पनि दिन सक्छौं, बौद्धिकको। ग्वाटेमेला, ऑस्कर इसहाक - केहिको अनमोल सहयोगको साथ चश्मा र जेन शैली अलमारी- Ex-Machina, जहाँ उनले एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता geek खेल्छन् मा यो प्रभाव प्राप्त गर्नुहोस्।
टम हार्डी ('पागल मैक्स: फ्युरी रोड') र ट्राभिस फिमेल ('वाइकिंग्स') ले हालसालै दुई फोटो फोटोकलमा यस लुकमा क .्गाल गरेको छ, पहिलोमा यो हाइलाइट गर्दै, त्यो सूटको साथ यो पनि असाधारण देखिन्छ। अष्ट्रेलियाको बारेमा, उनीले अरु अनौपचारिक कपडाहरूको लागि छनौट गरे, यद्यपि हामी पनि परिणामलाई धेरै मन पराउछौं। परम्परा, दाह्री संग कपाल टाउको एक उत्तम विचार हो जुन तपाईंको शैली.
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » व्यक्तिगत हेरचाह » कपाल शैली » कपाल टाउको र दाह्री, राम्रो वा नराम्रो विचार?
ज्यामिति र फ्लानेल, चेकर शर्टहरूको फिर्ती
लिंग को क्यान्सर, एक थोडा ज्ञात क्यान्सर